‘गुनगुन’मा चन्दाको बबाल आइटम डान्स
काठमाडौं । अभिनेत्री संचिता लुईंटेल स्टारर फिल्म ‘गुनगुन’ को आइटम गीत सार्वजनिक भएको छ । कलाकार पुकार भट्टराईको निर्माणमा तयार भएको फिल्मको ‘काजु किसमिस…’ बोलको गीतमा चन्दा दाहाल आइटम गर्लको रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । कमल पौडेलको शब्द, महाराज थापाको संगीत रहेको गीतमा स्वर सुनिता कार्कीले दिएकी छिन् । गीतको भिडियोलाई रामजी लामिछानेले निर्देशन गरेका […]
ओम्याक्स हलमा के कारणले भयो आगलागी ?
काठमाडौं । हेटौंडास्थित ओम्याक्स हलमा आगलागी हुँदा करोडौंको क्षति भएको छ ।नरेन्द्र महर्जनले हेटौंडा–४, हुप्राचौरमा सञ्चालन गरेको फिल्म हलमा बुधवार बिहान करिब १० बजे आगलागी भएको हो । हेटौंडा उपमहानगर र आयल निगम अम्लेखगञ्जका दुई दमकलको सहयोगमा सुरक्षाकर्मी र स्थानीयको प्रयासमा हलमा आगो लागेको करिब साढे २ घण्टापछि आगो नियन्त्रणमा लिइएको हो । जिल्ला प्रहरी […]
जब रत्नपार्कमा खरभुजा बेच्दै भेटिइन् अभिनेत्री लक्ष्मी गिरी (फोटो फिचर)
काठमाडौं । झण्डै चार दशक कलाकारिता क्षेत्रमा योगदान पु¥याएकी अभिनेत्री लक्ष्मी गिरी अझै पनि उर्जावान् छिन् । नेपाल टेलिभिजनबाट अभिनय यात्रा शुरु गरेकी लक्ष्मीले त्यसयता कति फिल्ममा कस्ता चरित्र निभाइन्, सबैले देखेकै छौं । टेलिचलचित्रमा उनको भूमिकालाई सबैले रुचाएकै हुन् । त्यस बाहेक अहिले पनि उनको अभिनय यात्रा निरन्तर छ । हालै उनी राजधानीको रत्नपार्कमा […]
रामकहानीसँग ‘रोजी’को भिडन्त
काठमाडौं । नेपाली चलचित्रका निर्माताहरुले आफ्नो लगानीको कुनै पर्वाह नगरी चलचित्र चलाउन एकै मिति जुधाउने घटना नेपाली चलचित्र क्षेत्रका लागि नौलो रहने । एकै दिन ४–५ वटा चलचित्र प्रदर्शनमा आएको इतिहास पनि छ । पछिल्लो समय पनि चलचित्रले सोलो रिलिज नपमाएको अवस्था छ । यही बीचमा आगामी भदौ २२ गते पनि बीग बजेटका दुई चलचित्र […]
निश्चल र नम्रताको जोडी कत्तिको जम्ला ?
काठमाडाैं । अभिनेत्री नम्रता श्रेष्ठ तथा अभिनेता द्वय विपिन कार्की र निश्चल बस्नेतले पहिलो पटक एकसाथ स्क्रिन साझेदारी गरेको चलचित्र ‘प्रसाद’ टोलीले चलचित्रको प्रदर्शन मिति तोकेको छ । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा चलचित्रको प्रदर्शन मंशिर २१ गते आउने जानकारी दिइएको हो । गत आइतबार ललितपुरमा रहेको राजु पेन्टर स्टुडियोमा चलचित्र पत्रकार संघ, नेपालका उपाध्यक्ष दिनेश […]
आर्यनको अंगालोमा सृष्टि, तालको किनारामा रोमान्स !
काठमाडौं । सन् २०१२ की मिस नेपाल सृष्टि श्रेष्ठ लगातार चलचित्रमा देखिँदै आएकी छिन् । पछिल्लो पटक रोमियो एण्ड मुनामा देखिएकी सृष्टिकै अभियन रहेको चलचित्र ‘बाँध माया’ले प्रदर्शनको तयारीमा छ । फिल्ममा नायिका श्रृष्टिसँगै अभिनेता आर्यन अधिकारीको अभिनय रहेको छ । आर्यन पछिल्लो पटक चलचित्र ‘बटरफ्लाई’मा देखिएका थिए । तर उक्त चलचित्रले भने दर्शकको साथ पाउन […]
प्रवासमा मन जित्दै ‘पञ्चायत’
काठमाडौं– चलचित्र विकास बोर्डबाट २०७४ सालमा प्रदर्शनमा आएका फिल्ममध्येबाट ‘विशेष फिल्म’ सहित नगद २ लाखबाट पुरस्कृत भएको फिल्म ‘पञ्चायत’ विदेशका विभिन्न देशहरुमा प्रदर्शन भइरहेको छ । चलचित्रको विदेश प्रदर्शनबाट आएको पैसा सामाजिक सेवाका लागि खर्चिने निर्माण पक्षले जनाएको छ । मकवानपुर जिल्लामा एम्बुलेन्स सेवा सुचारु गर्ने उद्देश्यले मकवानपुर मिलन केन्द्र कतारको आयोजनामा चलचत्रि कतारमा प्रदर्शन […]
‘मोडल हन्ट’का लागि काठमाडाैंबाट ५० जना छनोट
काठमाडौं । ‘मोडल हन्ट नेपाल २०१८’का लागि ५० प्रतियोगी छनोट भएका छन् । हालै राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा छनौट चरणको अडिसबाट २५ युवा र २५ युवती अन्तिम चरणको अडिसनका लागि छानिएका हुन् । अडिसनमा २ सय बढि युवायुवतीको सहभागिता रहेको थियो । अभिनेता कोरियोग्राफर प्रशान्त ताम्राकार, फोटोग्राफर राजभाइ सुवाल, अभिनेत्री, मोडल सृजना रेग्मी, कोरियोग्राफर रोजिन […]
बालापनको यादमा अनुभव र सेड्रिना
काठमाडौं । यस वर्षको प्रतिक्षित चलचित्रको रुपमा रहेको चलचित्र‘नाई नभन्नु ल ५’ को दोस्रो गीत सार्वजनिक गरिएको छ । बाल कलाकार अनुभव रेग्मी र सेड्रिना शर्मा अभिनित सार्वजनिक गीतमा बालापनको उमेरको बारेमा बयान गरिएको छ । ‘वालापनको उमेर’बोलको सार्वजनिक गीतमा समिक्ष्य अधिकारीको स्वर रहेको छ भने शब्द तथा संगीत बसन्त सापकोटाको रहेको छ । गीतलाई […]
‘बकम्फुसे राजा’की रानी वर्षा !
काठमाडौं । पछिल्लो समय चलेकी नायिका वर्षा राउत एक पछि अर्को गर्दै विभिन्न फिल्ममा अनुबन्धित भइरहेकी छिन् । उनको अभिनय रहेका प्रायः चलचित्रले सफलता हात पारेसँगै उनी निकै व्यस्त बनेकी छिन् । केही दिन अघि नयाँ चलचित्र गोपीमा अनुबन्धित भएकी वर्षाले अहिले नयाँ चलचित्र ‘बकम्फुसे राजा’मा रोल निभाउन राजी भएकी हुन् । सञ्चारकर्मी प्रकाश सुवेदीले […]